'रन्जन कोइरालालाई उन्मुक्ति दिनेलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन जोड्दार मांग गर्दछु' | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण ९ गते ०९:३०
राम प्रसाद रिजाल , नेकपा युवा नेता
राम प्रसाद रिजाल । पत्नी हत्यामा जेल सजाय खेपिरहेका पूर्व डिआजी रन्जन कोइराला लाई अबधि अगाबै लगभग १६ वर्ष अघाढी नै उन्मुक्ति दिएर सर्वोच्च अदालत का प्रधानन्याधीस चोलेन्द् शमशेर बाट गम्भीर क्षमायाचना समेत गर्न नहुने गल्ती भएको छ । सम्मानित न्यालयको म सम्मान गर्दछु तर पत्नीलाई बिभत्सब तरिकाले हत्या गरेका कोईरालालाई किन उन्मुक्ति दिएर न्यायायल प्रतिको जन विश्वास लाई डगमगायौं ? के को चलखेल ले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गरियो सम्माननीय प्रधानन्यायधिस ज्यू ?
समाननीय गरिमामय सर्वोच्च अदालतले अबिलम्ब आफ्नो निर्णय सच्चाएर पूर्व डिआईजी रन्जन कोइरालालाई उनको बांकी जेल सजाए १६ बर्ष भन्दा बढ़ी छ । त्यो सजाए दिलाएरै छोडो्स हैन भने यो मानवता बिरोधी निर्णय गर्ने सम्माननीय प्रधानन्याधीस उनको टिमलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन म सर्वोच्च संसद लाई जोड्दार मांग गर्दछु ।
पत्नी हत्याको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट साढे ११ बर्ष कैद मिनाह पाएका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइराला जेलबाट हात हल्लाउदै बाहिरिए । प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले ‘चित्त’मा लागेको र ८ वर्ष ६ महिनामा बस्दा मकस्द पुरा भएको हुने भन्दै जेलमुक्त गरिदिएपछि उनि विहिवार विहान डिल्लीबजार जेलबाट मुक्त भएका हुन् । पत्नी गीता ढकालको हत्यामा जेल गएका कोइरालालाई लिन उनकी प्रेमीका तारा रेग्मी बा १८ च ५४१७ नम्बरको कार चलाएर डिल्लीबजार पुगेकी थिइन् । कोइराला बिहिवार विहान ११ बजेर ५० मिनेटमा जेलबाट बाहिर निस्किएका थिए । खरौं रंगको कमिज लगाएर निस्किएका उनले त्यहा रहेका संचारकर्मीलाई हात हल्लाउदै बाहिरिए ।
रेग्मी पनि ढकालको हत्यामा संलग्न भएको देखिएपछि शुरुमा जेल परेकी थिइन् । पछि उनि भने रिहा भएकी हुन् । कोइराला पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । कोइरालाले मकवानपुरको टिस्टुङ पालुङमा हत्या गरी जलाएर फर्किँदै गर्दा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजीलाई प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले भारी कैद छुट दिएको हो । श्रीमतीको हत्या गरी शवसमेत नष्ट गरेका तत्कालीन डीआईजी कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्ष मात्रै कैद सजाय सुनाएको हो । सर्वोच्चले असार दोस्रो साता गरेको फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार कैदमुक्त्त भए ।
सरकारले भने सो आदेशका विरुद्धमा सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विहिवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको प्रवक्ता संजिवराज रेग्मीले बताए । संविधानको धारा १३३ (४)ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो अन्तिम फैसलाको पनि पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिले फैसला गर्ने बाहेकका न्यायाधीशले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्छ ।
प्रेम थोकर l कोरोना भाइरसको महामारीको कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयको र अन्य विश्व बिद्यालयहरु को परीक्षा अस्तब्यस्त अबस्थामा रहेका छन । केही समय यता लकडान खुले सगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुचना जारी गरी भदौ देखि सबै तह को परीक्षा हुने सुझाव दिएका थिए तर,कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको हुनाले पुन त्रिविले अर्को सुचना जारी गरी परीक्षा तोकिएको समयमा नहुने जनाइएको थियो सो कार्यको विरोध जनाउन कयौं बिधार्थी साथीहरूले त्रिविलाई सो समस्याको समाधानको उपायको माग गर्दा पुलिस प्रशासन प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक छ ।
हिमालय कार्की । आस्था र विश्वास उसै पनि वैज्ञानिक परिक्षणबाट टाढा नै रहन्छन् । आस्था, विश्वास, अध्यात्म यि सवै भावनात्मक आवेगहरु हुन् यिनका सुचक मात्रै हुनछन् मापक हुँदैनन् ।